नेकपामा महाअभियोगको 'भूत' छिरेपछि :: सन्जिब बगाले :: Setopati
सन्जिब बगाले काठमाडौं, असार २२
गत शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री एंव नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न स्थायी समिति सदस्य एवम् कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल बालुवाटार गए। नयाँ स्तरको एकताका लागि पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर उनी बालुवाटार पुगेका थिए।
साढे ७ बजे बालुवाटार पुग्नासाथ मन्त्री भुसाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरूद्ध महाअभियोग लगाउने षडयन्त्र भइरहेको बताए। महाअभियोग कसरी लगाउन सकिन्छ भन्नेबारे कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफलसमेत भइसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।
ओलीका कुरा सुनेर मन्त्री भुसाल अलमलमा परे, कुनै जवाफ दिएनन्।
बालुवाटारबाट निस्किएपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले छलफल गरेको भनिएका कानुन व्यवसायीसँग कुराकानी गरे।
ती कानुन व्यवसायीले छलफल भएको तर महाअभियोगबारे कुनै छलफल नभएको भुसाललाई जानकारी दिए।
भोलिपल्ट अर्थात् शनिबार साँझ ७ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई बालुवाटार बोलाए। त्यहाँ पनि उनले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगको कुरा दोहोर्‍याए। राष्ट्रपतिविरूद्ध षडयन्त्र भइरहेको र महाअभियोग लगाउन कानुन व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको भन्दै आक्रोश पोखे।
उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली बोलिसकेपछि कृषि मन्त्री भुसालले आफ्नो भनाइ राखे। सो बैठकमा उपस्थित एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्रीलाई गलत रिपोर्टिङ हुने गरेको तर्क गरे।
'सही सूचना राखिएन भने कहिलेकाहीँ गलत कुरा आउन सक्छन्। त्यसैले सूचना प्रणाली दुरूस्त गर्नु राम्रो हुन्छ। महाअभियोगको कुरा झुठा हो। मसँग त्यसको प्रमाणसमेत छ,' मन्त्री भुसालको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने, 'मुलुकमा अनिश्चिता भएका बेला गलत सूचना आउँछन्। विभिन्न शक्तिहरूले गलत हल्ला फिजाउन सक्छन्। यस्तो बेला नेतृत्व सजग हुनुपर्छ।'
महाअभियोगको 'भुत' बालुवाटारमा मात्र सीमित थिएन, राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवाससमेत छिरेको थियो। मन्त्री/राज्यमन्त्रीहरूलाई बालुवाटार बोलाउनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार राष्ट्रपति भण्डारीसँग सवा घन्टा कुराकानी गरेका थिए। त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिविरूद्ध कतिपयले महाअभियोगको तयारी गरेको भन्दै सचेत गराएका थिए।
त्यसको अनुमान गरेर पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र कृषि मन्त्री भुसालले नेकपा अध्यक्ष दाहाल, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिसँग भेटका लागि पहल गरे।
सुरूमा तीन नेताहरूसँग भेट्न शितल निवास अनिच्छुक देखिएको थियो। तर भुसाल र भट्टराईकै आग्रहमा उनीहरूले राष्ट्रपतिसँग भेट गरेको स्रोतको दाबी छ।
आइतबार बिहान शितल निवास पुगेका प्रचण्ड, खनाल र नेपालसँग राष्ट्रपतिले महाअभियोगबारे गुनासो गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘तपाईंहरूले त मलाई महाअभियोग लगाउन खोज्नुभएको रहेछ।’ तीनै नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने आफूहरुको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेका थिए।
कसरी चल्यो महाअभियोगको हल्ला ?
प्रचण्डले ‘हतार नगरौं’ भन्दाभन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे। त्यसले उत्पन्न गरेको संवैधानिक तथा कानुनी अन्यौलबारे प्रचण्डलगायतका नेताले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए। सोही छलफललाई अतिरञ्जित गरेर राष्ट्रपतिविरूद्ध महाअभियोगको ‘भुत' जगाइएको नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सम्भावित अन्यौलबारे राय लिन पाँच जना सचिवालय सदस्य, प्रमुख सचेत देव गुरूङका साथै स्थायी कमिटीका केही सदस्यलाई राखेर पार्टीनिकट कानुन व्यवसायीसँग गरेको छलफललाई राष्ट्रपतिसमक्ष गलत सूचना पुर्‍याइएको बताएका छन्।
सम्भावित अध्यादेश र त्यसबाट हुन सक्ने दल विभाजनबारे पार्टीका कानुन विभाग प्रमुख रघुजी पन्तको संयोजनमा अध्यक्ष प्रचण्डको निवासमा १५ जनाबीच भएको उक्त छलफलका बारे राष्ट्रपतिलाई स्पष्ट पारिएको समेत रिजालको भनाइ छ।
‘मलाई त कोटेश्वरमा तपाईंहरू दुई जना (प्रचण्ड र माधव नेपाल) ले दुई जना कानुनविद (युवराज संग्रौला र गोविन्द बन्दी) राखेर महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल गरेको भनेर पो रिपोर्टिङ गरियो त’ राष्ट्रपतिले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै रिजालले फेसबुकमा लेखेका छन्।
त्यसपछि तीन नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई यथार्थ बताएका थिए।
'हुँदै नभएको एउटा घटनाका कारण राष्ट्रपतिका मनमा उब्जिएको आशंका मेटाएर हिँड्दै गर्दा उहाँले (राष्ट्रपति) भन्नुभएछ,’ रिजालले लेखेका छन्, ‘हेर्नूस् न बेकारमा होहल्ला गरेर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ बढाइदिए।'
राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गर्न प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए। प्रचण्ड बैठक कोठामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘डेलिगेसन गएर आउनुभयो’ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए।
'तपाईंहरू राष्ट्रपतिकहाँ डेलिगेसन जानुभएछ। राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउन हुँदैन भनिन्थ्यो त,' प्रचण्ड-ओलीको संवादबारे एक नेताले सेतोपाटीसँग भने।
प्रचण्डले पनि तुरुन्तै जवाफ फर्काएका थिए।
'तपाईंले फैलाउनु भएको भ्रम चिरेर आएको हो,' प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘महाअभियोगबारे राष्ट्रपतिलाई नभएको कुरा किन लगाउनु भएको?'
बैठकको सुरूमै दुई अध्यक्षबीच भनाभन जस्तो भएपछि आइतबारको छलफल सकारात्मक हिसाबले अघि बढ्न सकेन।
केहीबेर बसेपछि प्रचण्ड ‘आज सीता(प्रचण्ड पत्नी)को जन्मदिन छ, म घर जान्छु तपाईंहरू बस्दै गर्नुस्’ भनेर बालुवाटारबाट हिँडेका थिए।
सोमबार बिहान पनि दुई अध्यक्षबीच केहीबेर छलफल भए पनि निष्कर्ष केही निस्कन सकेन। सोमबार बिहान ११ बजेका लागि तोकिएको स्थायी कमिटी बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २२, २०७७, १४:४९:००